Balaastiigyada nooci kara: waa maxay, sifooyinka iyo faa'iidooyinka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Balaastikadaha wax baabi'in kara
Jarmal Portillo | 06/05/2021 09:07 | Dib u warshadaynta
Balaastikadu waa walxaha wasakheeya deegaanka maanta. Waxaa lagu soo saaraa tiro aad u tiro badan waxayna leeyihiin adeegsiyo kala duwan. Dadku waxay ogaanayaan muhiimadda ay leedahay daryeelka deegaanka, laakiin kuma filna. Ujeedadaas oo ah ilaalinta dabeecadda, fikradda ah balaastiigyada wax baabi'in kara. Balaastiigani waxay xalka u noqon karaan dhibaatada weyn ee adduunka ka jirta ee wasakhaysan maadadan. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in si fiican loo ogaado waxa ay xaddidan yihiin iyo sababta aysan ugu fududaanayn in lagu dhiso balaastigani dhammaan konteenarrada adduunka.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan astaamaha iyo muhiimada balaastikada baabiin kara.
1 Waa maxay caagagga la baabiin karo
2 Cilmiga noolaha iyo deegaanka
3 Dhibaatooyinka la xiriira caagagga wax baabi'in kara
Waa maxay caagagga la baabiin karo
Waxa ugu horreeya oo dhan waa in la ogaado macnaha ereyga biodegradable. Bayoolajiyeynta (biodegradability) waa cinwaanka burburka oo ay alaabta iyo walxaha qaarkood ku kala baxaan mahadnaqa ficil ahaan noolaha noolaha qaarkood. Noolaha noolaha ee hoos u dhigi kara maaddooyinka waxaan leenahay bakteeriya, fungi, algae, cayayaan, iwm. Caadi ahaan noolahaani waxay isticmaalaan walxo si ay u dhaliyaan tamar iyo iskudhisyo kale sida unugyada, noolaha iyo amino acids. Marka taas caag ah ayaa nooleyn kara xaaladaha qaarkood ee iftiinka, huurka, heerkulka, oksijiinta, waa in la buuxiyaa, iwm Fadli badan si ay ugu dhici karto muddo gaaban.
Midkoodna ma aha nooc caag ah oo kaligiis xaalufin kara laakiin waqti dheer qaadanaya, maxaa yeelay aakhirka waxaan la kulmi doonnaa dhibaato la mid ah qashin urursiga. Waxaan dhihi karnaa waa badeecad la nooleyn karo markii lagu kala bixi karo ficilka deegaanka iyo noolaha noolaha ee ku nool nidaamka deegaanka. Waxaa jira dhowr nooc oo biodegradation iyadoo kuxiran jiritaanka ama maqnaanshaha oksijiinta. Dhinac, waxaan leenahay cilmiga aerobic biodegradation ee ka dhaca meesha ay oksijiin ku jirto hawada furan. Dhinaca kale, waxaan leenahay nooleerab biodegradation oo ka dhaca meelaha aan oksijiin lahayn. Ta labaad, gaaska noolaha ayaa la soo saaraa, kaas oo ah gaaska lagu koriyo oo kordhiya kuleylka adduunka, laakiin sidoo kale loo isticmaali karo in lagu soo saaro tamar.
Cilmiga noolaha iyo deegaanka
Bayoolajiyeynta ayaa caadi ahaan la xiriirta cilmiga bey'ada iyo dhaawaca ay caagagga ku soo saaraan dabeecadda. Waan ognahay in balaastikadu ay ku qaadato boqolaal sano in ay ku bur burto waxayna sidoo kale kuxirantahay sida ay u dhisan yihiin Isku-darka iyo waqtiga burburka ayaa ah arrin muhiim ah oo lagu xisaabtamo si loo go'aamiyo heerka bayoolajiga. Waxaan arki karnaa in diirka muuska kaliya uu qaato illaa 2-10 maalmood in la xaalufiyo. Warqaddu waxay qaadan doontaa qiyaastii 2-5 bilood, waxay kuxirantahay qaabkeeda iyo halabuurkeeda. Wax soo saarkan ayaa aad uga fudud in la xaalufiyo marka loo eego baakadaha ay ku jiraan balaastigga iyo xaashida inkasta oo caaggu yahay mid la nabaad guuri karo.
Waxaan dhihi karnaa balaastikada wax baabiin karta ayaa ah kuwa lagu sameeyo alaabada ceyriinka ah ee gabi ahaanba la cusbooneysiin karo. Agabkan ceyriin waa qamadi, galley, galley, baradhada, mooska, saliidda soybean ama kasaafada. Marka la eego habka wax soo saarka laftiisa, balaastikada ayaa ku nooleyd by noolaha. Taas macnaheedu waxa weeye in dib loogu soo celin karo wareegga dabiiciga ah qaab bacrimin dabiici ah oo faa iido u leh ciidda. Maheleyno kaliya in aan helno waxyaabo aan wasakheynin, laakiin sidoo kale waxtar u leh deegaanka. Waqtiga xaalufinta ayaa aad uga yar caagagga caadiga ah.
Dhibaatooyinka la xiriira caagagga wax baabi'in kara
In kasta oo waxaas oo dhami ay u muuqdaan kuwo aad u qurux badan oo xalka u ah dhibaatooyinka oo dhan, haddana sidaa ma aha. In kasta oo alaabta ceyriin ee dabiiciga ah la isticmaalo oo dabiiciyan dib loo cusbooneysiin karo, caagagga wax baabi'in kara ayaa soo bandhigaya dhibaatooyinka qaar. Aan aragno waxa ay dhibaatooyinkani yihiin:
Calaamadeynta caagadahaas ma cayimayso in isticmaalkeedu yareyn karo wasakheynta wabiyada iyo badaha. Waana shuruudaha ay balaastigani u baahan yihiin inay yeeshaan burburin buuxda oo ku dhici kara badaha iyo badaha. Taasi waa, haddii ay ku dhammaadaan goobahan, waxay ku qaadan karaan qarniyo inay wax kudarsadaan maaddaama nooleyaasha ku hoos jira burburka aysan helin oksijiin ku filan oo ay ku fuliyaan hawshooda.
In kasta oo ay qaadanayso waqti yar in hoos loo dhigo deegaanka dabiiciga ahi wuxuu qaadan karaa ilaa 3 sano. Tusaale ahaan, haddii aan falanqeyno burburka qaar ka mid ah xafaayadaha caadiga ah ee lagu farxo waxaan aragnaa inay qaadanayso qiyaastii 350 sano in la xaalufiyo, halka kuwa lagu sameeyay balastik-yada la baabi'in karo ay qaadan karaan inta u dhexeysa 3-6 sano.
Marka ay timaado dib u warshadaynta waxay noqon kartaa dhibaato. Dib-u-warshadaynteedu waa mid aad u adag. Taasina waa in lagu noolaado aan lagu qasi karin caagagga caadiga ah. Taas macnaheedu waa in istiraatiijiyad dib-u-warshadayn oo kala duwan looga baahan yahay alaabooyinkan.
Waa inaan maanka ku haynaa in soo-saarka caagagga wax baabi'in kara laga soo saaray ilaha cuntada. Taas macnaheedu waxa weeye in kasta oo ay yihiin kuwo ku noolaan kara muddo gaaban, haddana dhul ballaadhan ayaa loo baahan yahay si loo awoodo in loo koriyo dhammaan wax soo saarka soo saaristooda. Intaas waxaa sii dheer, beerista waxay u baahan tahay bacrimin iyo biyo, taas oo kordhin karta ka faa'iideysiga iyo xaalufinta nidaamka deegaanka.
Xaaladaha gaarka ah: Kuwani waa shuruudo loo baahan yahay, sida ku dhacda dhirta lagu bacrimiyo warshadaha. Way adagtahay in la ilaaliyo xaaladahan wax soo saarka balaastigga ah.
Faahfaahinta ilaha la cusboonaysiin karo ma yareynayo isticmaalka kiimikooyinka waxyeellada leh ama wax lagu daro si ay u yeeshaan muuqaal iyo adeeg ku habboon.
Ugu dambeyntiina, waxaan arki doonnaa waxa ay yihiin labada nooc ee waaweyn ee caagagga wax baabi'in kara ee jira:
Bioplastics: waa kuwa laga helo alaabta ceeriin ee dib loo cusboonaysiin karo.
Balaastikada lagu sameeyay waxyaabo lagu daro waxyaabo baaba'aya: waa nooca balaastigga ah ee aan loo soo saarin sida alaabta ceyriinka ee dib loo cusboonaysiin karo gebi ahaanba, laakiin sidoo kale waxay ka kooban yihiin qaar ka mid ah xeryahooda qeyb ka sameysan kiimikooyinka kiimikada ee hagaajiya noolaha.
Tusaalooyinka waxtarka leh ee ay leeyihiin labada nooc ee caagagga wax baabi'in kara waa kuwa soo socda:
Duubista: waa kuwa laga sameeyay balaastiig wax baabi'in kara waxaana loo isticmaalaa baakadaha cuntada. Waqti aad u yar ayey qaadataa in la jajabiyo marka loo eego caagagga soo jireenka ah waxayna caawisaa yareynta wasakheynta.
Qeybta beeraha: lagu qasi karaa jaakad abuur ah iyo mulch si loo soo saaro daboolka dhulka.
daawo: Iyagu waa ikhtiyaar kale oo loogu talagalay soo saaridda wax soo saarka qaarkood oo loogu talagalay daawada. Kuwaas waxaa ka mid ah waxaan leenahay kaabsullo la karaarayn karo oo lagu nusqaamin karo jirka aadanaha dhexdiisa.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto caagagga noociisu karayo iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Dib u warshadaynta » Balaastikadaha wax baabi'in kara
Ololaha dib u warshadaynta
Halka waji-ka-tuurista lagu tuurayo